Somaliland: Xafladda Furitaanka Mashruuca Dib-U-Dhiska Waddada Isku Xidha Xamaas ilaa Hargeysa - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Xafladda Furitaanka Mashruuca Dib-U-Dhiska Waddada Isku Xidha Xamaas ilaa Hargeysa
Dawladda Somaliland waxa ayaa shalay si rasmi ah u furtay mashruuc lagu dayac tirayo waddada isku xidha Xamaas ilaa Hargeysa, mashruucaasi oo laga maalgalinayo Sanduuqa Horumarinta Somaliland (SDF). Waxa Mashruuca furitaankiisa si rasmi ah ugaga dhawaaqay tuulada Xamaas Madaxwaynaha Jamuuriyada Somaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud “Siilaanyo”.
Waddada isku xidha Berbera iyo Hargeysa waxa la sameeyay toddobaatannadii waana waddo halbowle ah oo dekedda Berbera ku xidha Hargeysa illaa xuduudda Itoobiya. Wakaaladda Horumarinta Waddooyinka (RDA) ayaa dhawaan soo gebo-gebeysay dayactirka 100 kilomitir oo ka mid ah isla waddadan inta u dhaxaysa tuulada Xamaas illaa Sheekh. Dayactirkaas waxa ka mid ahaa dib-udhiska biriishka Huddusa. Wakaaladdd Horumarinta Waddooyinku waxa ay sidoo kale dayactir ku samaysay 20.6 kilomitir oo ah inta u dhaxaysa Degmada Dila iyo Kalabaydh oo ay marto waddada isku xidha Hargeysa iyo Borama. Mashaariicdan dayactirka waddooyinka waxa laga maalgeliyey Sanduuqa Horumarinta Somaliland ee (SDF) Dayactirkani waxa uu wax weyn ka taray xaaladda waddada iyada oo ay yaraadeen shilalkii baabuurta, sidoo kalena uu soo gaabtay wakhtigii isu socodka magaalooyinku, iyo iyada oo uu ka yaraaday gaadiidleyda kharashkii kaga bixi jiray dayactirka.
Mashruucan la dhagax-dhigay waxa isna laga maalgelinayaa Sanduuqa Horumarinta Somaliland ee (SDF) waxaanu dayactir ku samayn doonaa 30 kilomitir oo ka tirsan inta u dhaxaysa tuulada Xamaas iyo Hargeysa. Waxa la rajaynayaa in dayactirkani wax weyn ka tari doono xaalladda waddada islamarkaana ay yaraan doono wakhtiga isu-socodka magaalooyinka Berbera iyo Hargeysa. Mashruucan waxa lagu fulin doonaa muddo 8 billood gudohood ah, marka la dhamaystiro waxay noqonaysaa guud ahaan waddooyinka ay Wakaaladda Horumarinta Waddooyinku dayactirtay 130 kilomitir oo laga maalgeliyey Sanduuqa Horumarinta Somaliland (SDF)
Wasiirka Hawlaha Guud iyo Guriyeynta Mudane Cali Xasan Maxamed isaga oo ka hadlaya muhiimadda waddadani u leedahay qaranka, ayaa wuxuu yidhi “ Waxaan marag uga ahay qaadhaan bixiyayaasha Sanduuqa Horumarinta Somaliland in lacagtii cashuur-bixiyayaasha lagu maal-geliyey waddooyin muhiim u ah kaabayaasha dhaqaale. Waxaan ku faraxsanay in maanta la dhagax-dhigayo dayactirka waddada Xamaas – Hargeya, tani waxa ay wax weyn ka tari doontaa yareynta shilalka gaadiidka”
Madaxwaynaha Somaliland Mud. Axmed Maxamed Siilaanyo oo si rasmiya u dhagax dhigay waddadan ayaa hadal uu ka jeediyey madasha dhagax dhigay waxa uu kaga hadlay muhiimadda waddooyinku ay u leeyihiin isgaadhsiinta qaranka, waxaanu yidhi “farxad wayn bay ii tahay inaan ka soo qayb galo dhagax dhiga waddada isku xidhaysa Xamaas iyo Hargeysa, Waddadaasi waa waddo aad u muhiima isgaadhsiinta qaranku waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee dalku u baahan yahay, illaahay mahadii weeyaan inaynu maanta ku faanayno waddooyinkeena aynu dalka u dhisayno iyo isgaadhsiinteena aynu horumarinayo , dawladuna waxa ay ka hagran doontaa ma jirto illaahayna waxaynu ka baryaynaa inuu inagu guuleeyo”
Wasiirka Qorsheynta Qaranka Mudane Cali Ismaaciil Xuseen ayaa isna dhiniciisa u mahad celiyey qaadhaan bixiyayaasha Sanduuqa Horumarinta Somaliland ee (SDF) “Aniga oo ku hadlaya afka dawladda Somaliland, Waxaan uga mahad celinayaa qaadhaan bixiyayaasha Sanduuqa Horumarinta Somaliland taageeradooda joogtada ah ee horumarka Somaliland. Mashruuca waddadu waxa uu muhiim u yahay horumarka ganacsiga ee Somaliland iyo waddamada jaarka, gaar ahaan Itoobiya”
Sanduuqa Horumarinta Somaliland waa deeq lacageed oo loogu tallo galay in lagu caawiyo dawladda Somaliland kaas oo socon doona muddo afar sanno ah. Sanduuqa waxa loogu tallo galay inuu qayb ka noqdo qorshaha shanta sanno ee dhinaca horumarinta Somaliland. Sanduuqa waxa maalgaliyay Hay’adda Horumarinta Caalamiga u qaabilsan dawlada Ingiriiksa (DFID), hay’adda Horumarinta Caalamiga u qaabilsan dalka Denmark (DANIDA) iyo Dawladaha Norway iyo Netherlands.
Dhagax dhiga Wadada Xamaas iyo Hargeysa